Afhayeenka GID oo Dowladda Federaalka Ugu Baaqay In Ay Joojiso Faro-gelinta Siyaasadeed – VIDEO • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Koonfur Galbeed / Afhayeenka GID oo Dowladda Federaalka Ugu Baaqay In Ay Joojiso Faro-gelinta Siyaasadeed – VIDEO
Afhayeenka GID oo Dowladda Federaalka Ugu Baaqay In Ay Joojiso Faro-gelinta Siyaasadeed – VIDEO
October 22, 2018 - By: HORSEED STAFF
Af-hayeenka Golaha Iskaashiga dowladdaha Xubnaha ka ah DFS, ahna Wasiirka Wasaaradda Dastuurka maamulka Koonfur Galbeed Cabdullaahi Shiikh Xasan ayaa maanta 22 Oct 2018 shir Jaraa’id oo uu ku qabtay Madaxtooyada Puntland ee Garoowe kaga hadlay faragelinta ay Xukuumadda Dowladda Federaalka Soomaaliya ka waddo arrimaha siyaasadda dowladdaha Xubnaha ka ah dowladda Fadaraalka Soomaaliya.
Af-Hayeenka ayaa ugu horayn sheegay in shirka 4-aad ee Golaha Iskaashiga dowladdaha Xubnaha ka ah dowladda Fadaraalka Soomaaliya uu si habsamile u socdo, Isla markaana qodobo muhiim ah laga soo saaridoono maalmaha inagu soo aadan.
Sidoo kale Af-hayeenka ayaa sheegay in dowladda Puntland doorashadeeda iyo nidaamkeeda dowladdnimoba ugu madaxbanaan tahay sidii awelba ay u maamulan jirtey, isla mar’ahaantaana aanay wax shaqo iyo faragelintoona uga baahnayn Dowladda Fadaraalka Soomaaliya.
“Garoowe waxaa maalintii labaad si habsami ah uga socda shirka madasha Iskaashiga dowladdaha Xubnaha ka ah DFS, intii uu socdey shirkaasi waxay DFS wadey faragelin toos ah, iyadoona hore u go’aansatay duminta dowlad goboleedyada, Galmudug ayay qalalaaso siyaasadeed ka abuurtay, warqad ayay soo saartay ay uga hadlayaan doorashooyinka. Puntland 5 doorasho ayaa ka dhacday waxbana lagama waydiin DFS, iminkana waxba laga waydiin maayo, sidoo kale maamullada kale, umana baahna doorashooyinkaasi in Muqdisho laga soo yeedhiyo xiliga ay dhacayaan” ayuu yiri Afhayeenku.
Dhinaca kale Afhayeenka Madasha Iskaashiga dowladdaha Xubnaha ka ah DFS, ahna Wasiirka ka Wasaaradda Dastuurka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa xusay in ay DFS magaalada Baydhabo ka dejisey Baaburta aanay xabaddu karin iyo kudhowaad 50 ciidan ah, kuwaasi oo ay uga goleeyihiin khalkhalinta nidaamka dowladnimo ee ka jirta maamulkaasi iyo faragelinta doorashooyinka ee ay usoo tafaxaydatay.
Ugu danbayn, Afhayeenka Madasha Iskaashiga dowladdaha Xubnaha ka ah Dowladda Federaalka Soomaaliya, ahna Wasiirka ka Wasaaradda Dastuurka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdullaahi Shiikh Xasan ayaa ugu baaqay DFS inay joojiso Faragelinta iyo khalkhalka siyaasadeed ee ay ku wadaan dalka.